Igumbi lokulala eli-1 eli-1, amagumbi okulala ama-2 amancinci
Igumbi lokuhlambela eli-2
Ukulala 2 + 2
(INR 500/undwendwe/ubusuku kundwendwe +2)
Suka kubuphithiphithi bobomi besixeko kwaye ube namava okuzola kunye nokuzola kwehlathi. Yiba ngumntu okhululekileyo kwakhona.
I-Ammini's, i-Hivehomes ikwipropati yeehektare ezi-3.5 enamasimi ajikelezayo afana nejinja, i-tapioca, i-yam, njl. njl. Umlambo iKabini malunga ne-1 km ukusuka kwipropati ngumtsalane owongeziweyo. Umamkeli ofanayo noGeorge's Arabica, Robusta kunye neLimerica e-Bavali, eWayanad.
Le cottage inamagumbi okulala amathathu amancinci anebhedi enye kunye negumbi eliphindwe kabini elinebhedi enye. Izindlu zangasese ezimbini zahlukene kwaye azidityaniswanga kumagumbi okulala. Le cottage yindlu ehlaziyiweyo esetyenziswa ngabahlali balapha ngaphambili.
ISithili sase-Wynad ngummandla we-bio-diverse osasazeke kwi-2,132 km² kwindawo ephakamileyo yase-Western Ghats, i-Wynad sesinye sezithili ezimbalwa eKerala ekwazileyo ukugcina ubume bayo obunyulu. Zifihlwe kwiinduli zeli lizwe zezinye zezizwe ezindala, ezingekachukunyiswa yimpucuko. Kwaye imizobo yokuqala yembali eKerala efunyenwe kumazantsi eentaba ze-Edakkal nakwindawo engqonge i-Ambukuthimala inobungqina benkcubeko yangaphambi kwembali esusela kwiXesha leMesolithic. Ibukeka ngendlela emangalisayo, iyaziwa ngamasava ayo angaphantsi kwetropikhi, izikhululo zeenduli ezibukekayo, amasimi eziqholo, amahlathi ashinyeneyo kunye nezithethe ezityebileyo zenkcubeko. Indibano epheleleyo yentlango, imbali kunye nenkcubeko, iWayanad ikwincam esemazantsi yethafa leDeccan elimangalisayo.
Iimpawu eziphawulekayo zale cottage zinikwe ngezantsi. Ngelixa sisenza oko sifuna ukubonakala ekuhleni kwaye sisondele kwimeko yokwenyani ukuze ngaphezu kwayo yonke enye into ube nexabiso elithembekileyo lemali. Sizamile ukugxila kucoceko kunye nococeko ngaphandle kokuthomalalisa kulonwabo lomzimba olufanelekileyo ukuphumla, ukuphumla kwaye ukonwabele ukuthula. Siyathemba ukuba uya kuphinda wenze okufanayo ngelixa uhlala apho. Ngokuphathelele ukutya, yinjongo yethu ukukunika ipalethi enencasa.
Umgcini kunye nosapho lwakhe bahlala kufutshane kwaye bayafumaneka ngalo naluphi na uncedo kuquka nokutya. Nceda uqaphele ukuba ukutya kuya kubizwa imali eyongezelelweyo ngexabiso eliqhelekileyo. Yinjongo yethu ukukunika incasa yephalethi yendawo, abantu kunye nezinto kwaye hayi inkangeleko entle. Siyathemba ukuba uya kuxabisa okufanayo.
Umgcini kunye nosapho lwakhe bahlala kufutshane kwaye bayafumaneka ngalo naluphi na uncedo kuquka nokutya. Nceda uqaphele ukuba ukutya kuya kubizwa imali eyongezelelweyo ngexabiso…